Kuwa iskudaya Apple Music ayaa iska diiwaangeliyey waqti dheer kahor kuwa Spotify | Waxaan ka socdaa mac
Daraasad ayaa hada la daabacay halka lagu sharaxay dadka isticmaala ee tijaabiya Apple Music waxay ku dambeeyaan inay noqdaan macaamiisha lacag siinaya qiime 2,5 jeer ka sarreeya kuwa isku dayaya Spotify. Runtu waxay tahay inaan waxba iga yaabin.
Isticmaalaha Apple, wuxuu u eg yahay inuu fududeeyo adeegyadooda inta suurtogalka ah ee ku dhex jira nidaamka beedka tufaaxa. Haddii aad haysato iCloud, ma sii raadinaysid daruur kale, iyo haddii aad isku daydo Apple Music, mar dambe iskama qasmi doontid Spotify. Aaminaadda astaanta iyo isku-darka adeegyadeeda aaladaha Apple. Sidoo kale waa in lagu xisaabtamo in guud ahaan awoodda wax iibsiga ee adeegsadaha Apple badanaa ka sarreeyo tan Android….
Wolf Ventures kaliya ayaa soo saartay warbixin sharraxaysa in Apple ay u beddeleyso isticmaaleyaasha Apple Music ee suurtagalka ah inay macaamiisha ku siiyaan qiimo Waqtiyada 2,5 ka dhakhso badan isticmaalayaasha tijaabinaya Spotify.
Falanqeeyaha Gene munster wuxuu sharxayaa daraasaddaas in beddelkan degdegga ah ay wadaan macaamiisha qiimeeya khibradaha isku dhafan ee ay Apple bixiso. Wuxuu intaa ku daray inay sidoo kale saameyn ku leedahay in dadka isticmaala aaladaha IOS ay leeyihiin dakhli ka badan kuwa la tuuri karo marka loo eego celceliska milkiilaha aaladaha Android-ka, kuwaas oo ah kuwa inta badan la siiyo Spotify
Apple Music waxay leedahay macaamiil dhan 82 milyan
Warbixinta Wolf Ventures qor qodobbada soo socda:
Apple Music waxay leedahay qol ay ku koraan 82 milyan oo macaamiil ah 980 milyan oo isticmaala iPhone firfircoon (8%) oo aan wali iska qorin.
Celceliska macmiilka Apple Music wuxuu bixiyaa qiyaastii $ 7 bishii, taas oo u dhiganta kudhowaad $ 574 milyan bishii biil ahaan, 2.5% wadarta dakhliga.
In kasta oo Apple Music ay kordhineyso diiwaangelinteeda lacag bixinta si ka dhakhso badan Spotify, haddana saamiga suuqa adduunka ee labada shirkadood ayaa degganaa labadii sano ee la soo dhaafay.
Shirkadda Spotify waxay leedahay saamiga adduunka oo dhan 34% marka loo eego shirkadda Apple oo ah 20%. Loup Venteures wuxuu ku qiyaasayaa in saamiyada suuqa ee labada shirkadood ay ahaayeen 35% iyo 18%, siday u kala horreeyaan, 2018.
Runtu waxay tahay in adeeg sida Apple Music ah, oo shirkaddu leedahay "mid kale" oo ah nidaamka deegaanka ee Apple, ayaa soo sheegaya dakhli ku dhow 7.000 malaayiin doolar sanadkii. Kaftan yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Music » Isticmaalayaasha iskudaya Apple Music ayaa si aad ah uga horreeya kuwa isku dayaya Spotify
IMac 2020 naqshadeynta cilad-darrada, Shan Maalmood At xusuusta xuquuqda buugga iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple Marina Bay Sands oo ku taal Singapore waxay umuuqataa mid dhowaan furmaya